ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပျောက်ဆုံးသွားသော မှတ်ချက်များ”
Good Holiday Ko Paw,
I like to read your recent posts.
ကိုပေါ ပျောက်နေလို့ နေမှကောင်းရဲ့လားလို့...
မှတ်ချက်တွေပျောက်တာ မိတ်ဆွေတယောက် ဘလော့ဂ်မှာလည်း ကြုံတယ် ပြောပါတယ်။ ပန်ဒိုရာဘလော့ဂ်မှာတော့ သတိမထားမိဘူး။
Welcome Ko Paw. I am waiting your posts. :D :D :D
မအယ် ပို့စ်က ကော့မန့် တွေဆိုရင် အကုန်နီးပါး မရှိတော့ဘူး။ မနှစ်က ပို့စ်တွေဆို ကုန်သလောက်ပဲ။ တချို့ပို့စ်တွေ ကျတွေ ၁ခု ၂ခု ကျန်တယ်။ ခုလောလောဆယ် ပို့စ်တွေတော့ ရှိသေးတယ်။
တခုမှာတော့ removed byablog admin လို့ ရေးထားတယ်။ အံ့ရော။ မအယ်လည်း မဖျက်။ blog admin က ကိုယ်တယောက်တည်းပါ။
ကုန်သလောက်ကိုး ရှိနေပါပြီ။ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။
ဒီလို ကိစ္စမျိုး ရှိသလား။
ကိုပေါပျောက်နေတယ်လို့ ကျွန်မဆီမှာပါ blog reader တယောက်က cbox မှာ လာပြောသေးတယ်။
ကိုပေါရေ။ ဘလော့ တွေ မ၀င်ဖြစ်တာကြာပြီ။
ကျွန်တော်လည်း လိမ်စာသစ် ပြောင်းထားလို့ပါ။
လာဖတ်တယ်ကိုပေါ။နေကောင်းလား. ဆီးရောဂါကောင်းသလား. တံခါးပိတ်တဲ့ အကျင့်ကောလုပ်နေတုံးဘဲလား။ ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ကိုပေါ Blog အသစ်လေးတွေ ရေးပါဦး။ စောင့်မျှော်နေပါသည် ခင်ဗျား။ :)
ကိုမျီုးမြင့်မောင်တယောက်လည်း ပျောက်နေပါ့လား ။...
ကိုယ့်စာတွေအပေါ်ဝေဖန်ရှူတ်ချပေမယ့်(လူ့ကျင့်ဝတ်ဘောင်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့) ကော်မန့်တွေကို တကူးတက ပြန်တင်ပေးတဲ့အတွက်ရော အထင်အမြင်မှားတွေကို ပြေလည်အောင်ကြိုးစားပြီး ပြန်ဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ရော အထူးလေးစားပါတယ်ကိုပေါ။ ဆက်ရေးပါဦး။
ကွန်မင့်တွေပျောက်ရတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော့်အထင်ကိုပြောရရင် ကွန်မန့်ရေးသားသူ သုံးတဲ့ google account လုံးလုံးမရှိတော့ (delete account ဖြစ်စေ/သုံးမရတော့တဲ့ အခါဖြစ်စေ) တဲ့အခါမှာ ထိုအကောင့်နှင့်ရေးသားထားတဲ့ကွန်မင့်တွေ ပျောက်သွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ google server က web content တွေကို update (scrawl) လုပ်တဲ့အခါမှာ invaild ဖြစ်သွားတဲ့အကောင့်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ ထင်တာပဲဗျ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တာ တွေးကြည့်တာ။ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ စကားမစပ် ထူးထူးခြားခြား ငြိမ်သက်နေပါလား။
ကွန်မင့်တွေ ပျောက်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့.....
ဒီကနေ့ ပျောက်သွားတဲ့ ကွန်မင့်တွေကို ပြန်တင်တဲ့အခါ မူရင်း ကွန်မင့်အရှည်ကြီးတွေအတိုင်း တင်လိုက်ရင် တင်လို့ မရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ဘလော့ဂါဒေါ့ကွန်းမ် က စာလုံးအရေအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ကန့်သတ်လိုက်လေသလားမသိဘူး။ ဒါကြောင့် ကွန်မင့် ရှည်ရှည်ရေးမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းချင်း ခွဲရေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်